Chii chinonzi dzidzo uye nei chakakosha? Kuzvibatsira Zviwanikwa
"Dzidzo haichinje nyika, inoshandura vanhu vari kuzochinja nyika" Paul Freire. Pasina dzidzo hapana ramangwana, tariro yenyika iri nani, inogadzikana, inotsigira uye inoenzanirana kuvanhu vese zvinoenderana nedzidzo yavanogashira vanhu vava kugara mairi. Vana vemazuva ano vachave vatungamiriri vemangwana, uye hapana imwe nzira iri nani yekugadzirisa zvikanganiso pane kudzidza kubva kwavari.
Kune vanhu vazhinji, dzidzo inyaya yevana, izwi rakabatana nehudiki rinomira kuita zvine musoro kana mabasa ekukura asvika. Asi hapana chingave chinowedzera kubva pachokwadi, nekuti ruzivo harwune moyo, hapana munhu anozvarwa achiziva. Nechikonzero ichi, dzidzo yevana inoenderana nedzidzo yevanhu vari pamusoro pekudzidzisa kwavo, uye icho chikonzero chinogombedzera chekurega kumira kunatsiridza, kudzidza nekuwana zvinhu zvakawanda zvisingazivikanwe. Nekuti iwe zvakare unodzidza kuve baba kana amai vakanaka.
Iwe hauna kumbobvira wakura zvakanyanya kuti udzidze zvinhu zvitsva Uye haina kunonoka kugadzirisa, kuisa nguva, simba uye mari mune zvedzidzo uye kukura kwemunhu. Asi zvakakoshawo kwazvo kuti ugamuchire kuti iwe unokodzera kudyara iwe pachako, nekuti nguva zhinji unofunga zvakanyanya nezvevamwe zvekuti unokanganwa kuzvitarisira. Kudzidza zvinhu zvitsva kuchakubatsira panzira yako yehunyanzvi, asi zvakare munzira yako yemukati, muzivo yako yezvinhu uye mukukura kwako pachako.
Dzidzo kutapurirana kwezivo kumunhu, nechinangwa chekusimudzira huchenjeri, hunhu uye hunhu kugona zvimwechetezvo. Ndokureva, hazvisi zvekudzidza ruzivo chete, izvo zvinobvumidza mabasa akasiyana kuitwa neunyanzvi kana hushoma. Dzidzo yakakosha mukusimudzira hunhu izvo zvinotibvumidza isu kugara munharaunda, netsitsi, nekubatana uye kuremekedza zvimwe zvipenyu.
Uye izvi zvese iwe unogona kukura muhupenyu hwako hwese, nekuti kuwanikwa kwezivo ibasa rekureba-kurefu. Dzidzo inofanirwa kutarisirwa sehupenyu chirongwa, nekuti nguva dzose, chero nguva munzira, unogona kudzidzisa nekudzidza zvinhu zvitsva. Chii chimwe, kunatsiridza kudzidziswa kwako kunokutendera kuti uvandudze iwe, dzokororazve ruzivo rwako uye uzvigadzirire iwe kuti ugadzire hunyanzvi mumunda izvo zvinogona kukupa iwe mufaro uyo usingawanzo kuwanikwa.
Mumunda wedzidzo, iwo mikana haaperi. Izvo hazvisi zvekutarisa zvese zvaunoedza kuita pane imwechete poindi, kana kudzikisira kugona kwako. Haisi mubvunzo wekuziva kudarika chimwe chinhu, nekuti kudzidza kubva kune vakawanda kuri kukudziridza pfungwa dzako. Naizvozvo, muchikamu chino chakapihwa dzidzo mune rakapamhamha izwi rezwi, iwe unozogona kutsvaga akasiyana marudzi ekudzidza ayo ekuvandudza yako fundo.
Isu tinotsvaga nekukugadzirira nzira dzekuvandudza kutaura kwako. Kunyangwe akasiyana maitiro ekudzidza ayo ivo vachakubatsira iwe munzira yako yekusimudzira wega. Tichataurawo nezve mikana, nekuti ndizvo zvinovakirwa nedzidzo, kuvandudza zvinotarisirwa nekuwedzera mikana inoonekwa munzira.
Uye kuitira kuti usazopedza nguva uye simba uchitsvaga ruzivo rwese irworwo, muchikamu chino cheDzidzo uchawana ese marudzi esarudzo iyo yekuwedzera nayo ruzivo. Zvese zviri pamwero wekunetseka, pamwe nepamagariro, sainzi, zvinyorwa uye zvese izvo, pakupedzisira, zvinokubatsira iwe kuenderera nekuvandudza dzidzo yako.
Nokuti investa mauri, yako dzidzo uye yako kudzidziswa, hazvidi chete, asi zvakakosha kuti iwe pachako ubudirire. Uye haifanire kunge iri nyore hupfumi, nekuti kukosha kwakanyanya kwaunogona kuzviitira iwe neramangwana rako kuzvipira kwako pachako.
kubudikidza Maria Jose Roldan inoita 4 mwedzi .
Kudzidza Chirungu kunogona kuve nyore mune dzimwe nzira. Semuenzaniso, kubata nemusoro mazwi kana kudzidza girama, mibvunzo ine ...
45 ndatenda mitsara
kubudikidza Maria Jose Roldan inoita 5 mwedzi .
"Zvinozvarwa zvakanaka kuti titende" chinodaro chirevo chakakurumbira, uye ichokwadi chakakura kwazvo chatisingafanirwe kukanganwa ...
Correos 2020/2021 makwikwi: aya ndiwo mazuva ekunyoresa
kubudikidza Encarni Arcoya inoita 7 mwedzi .
Nhasi uno makwikwi bvunzo dzave nzira yekuwana basa rakatsiga. Nekudaro, izvi zvinozivikanwa ...
kubudikidza Maria Jose Roldan inoita 7 mwedzi .
Kana iwe wakambomira kufunga nezveuzivi uye psychology, ivo vakasiyana kubva kune mumwe nemumwe asiwo ...
Ungatanga sei mhedziso
Paunenge uchangobva kuita basa kana chero mhando yekunyora, kuita mhedzisiro yakanaka hakusi nyore. For…
Chii chinonzi neologisms
Unoziva here kuti chii chinonzi neologisms? Pamwe wakambozvinzwa uye ukatozvishandisa usingazive zvavari chaizvo. For…
Ndeapi madimikira uye mashandisiro awo
kubudikidza Maria Jose Roldan inoita 9 mwedzi .
Madimikira anoshandiswa zvakanyanya muchiSpanish uye anobatsirawo zvikuru. Castilian kana Spanish inonyanya ...
Tsvaga zvese nezvemibvunzo yakavhurika
kubudikidza Maria Jose Roldan inoita 12 mwedzi .
Kana tichitaura nezvemibvunzo yakavhurika, haina chekuita nemibvunzo yakavharwa. Mibvunzo yakavharwa painobvunzwa, kazhinji iine ...
Maitiro ekugadzirisa manzwiro
kubudikidza Maria Jose Roldan inoita 1 gore .
Zvakakosha kudzidza kudzora manzwiro ako kuti arege ari iwo anokudzora. Zvichida mu ...
Zvepuraimari, sekondari uye zvepamusoro mabasa
kubudikidza Susana godoy inoita 1 gore .
Zvinoitika zveupfumi zvemunyika zvinosarudzwa zvinoenderana nechinangwa chavo, kuti ugone kuwana matatu marudzi e ...
Zvichida iwe unofunga kuti kuitiswa kwenzira yekutsvaga kwakabatana chete nesainzi munda, zvisinei, ...
32 Masainzi Akaratidzirwa Nesainzi Kudzidza Nani (Uye nekukurumidza)
Ndeapi ese marudzi emutauro
Ndeipi yaive mipiro yaGalileo Galilei?
Ndeipi nzira yekuongorora? Hunhu, mitemo, kurongeka uye zvimwe
Hunhu nehunhu hweiyo isingaite polar covalent bond
Chii chinonzi technicalities? Tsanangudzo, nyaya uye mienzaniso
Ziva kuti ndeapi matavi ejogirafi
Zvimiro uye mashandiro etafura yekufananidza
Ndeapi mhinduro dzesimba? Mhando, Zvivakwa uye Mienzaniso
Chii chinonzi Kugovana Kwakagovaniswa? Zvinangwa, zvakanaka uye zvisina kunaka
Chii chinonzi Lamarck Dzidziso yeTransformism?
Chii chiri chinongedzo chenhamba chaidzo?
Monographic chinyorwa: hunhu, mhando, mashandiro uye zvivakwa
Chii chinonzi sero remhuka? - Maumbirwo, zvikamu uye mashandiro
Matanho enzira yesainzi: ndezvipi, tsananguro uye maitiro ekuzviita
Musoro Wenyaya Mutongo - Zvinoreva, Chinangwa, Mhando uye Mienzaniso
Chii chinonzi kutsvagisa munda - Matanho, hunhu uye maitiro
Ndeapi marudzi gumi nematanhatu ezvinyorwa?